Izikhangiso ze-Google | I-Google iyisebenzisela kanjani idatha yakho kuzikhangiso
Asithengiseli muntu ulwazi lwakho oluyimfihlo.
Ibhizinisi lakho lisuselwe kangakanani ekuboniseni izikhangiso, kokubili kumasevisi e-Google nakumawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza zeselula ezisebenza nathi. Izikhangiso zisiza amasevisi ethu mahhala wonke umuntu. Sisebenzisa idatha ukukubonisa izikhangiso, kodwa asithengisi ulwazi oluyimfihlo njengegama lakho, ikheli le-imeyili, nolwazi lokukhokha.
Sisebenzisa idatha ukwenza ukuthi izikhangiso zihlobane
Sizama ukukubonisa izikhangiso ezibalulekile ngokusebenzisa idatha esiyiqoqe kusuka kumadivayisi akho, kufaka phakathi usesho lwakho nendawo, amawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza ozisebenzisile, amavidiyo nezikhangiso ozibonile, nolwazi oluyimfihlo osinike lona, njengeminyaka yakho yobudala, ubulili, nezihloko ezinentshisekelo.
Uma ungene ngemvume futhi uncike kuzilungiselelo zakho zezikhangiso, le datha yazisa izikhangiso ozibona kuyo wonke amadivayisi akho. Ngakho-ke uma uvakashela iwebhusayithi yokuhamba kukhompyutha yakho emsebenzini, ungahle ubone izikhangiso mayelana namanani endiza kuya e-Paris efonini yakho kamuva ngalobo busuku.
Abakhangisi bakhokhela kuphela izikhangiso abantu abazibonayo noma abazithephayo
Uma abakhangisi basebenzisa imikhankaso yesikhangiso nathi, basikhokhela ngokususelwe kuphela ekutheni lezo zikhangiso zisebenza kanjani — lutho kulwazi lwakho lobumfihlo. Lokho kungabandakanya ngaso sonke isikhathi othile abuka noma athepha isikhangiso, noma enza okuthile ngemuva kokubona izikhangiso, njengokulanda uhlelo lokusebenza noma ukugcwalisa ifomu lesicelo.
Sibonisa abakhangisi ukuthi imikhankaso yabo isebenze kanjani
Sinika abakhangisi idatha mayelana nokusebenza kwezikhangiso zabo, kodwa senza lokho ngaphandle kokuveza noma iluphi ulwazi lwakho oluyimfihlo. Kuso sonke isinyathelo kwinqubo yokukubonisa izikhangiso, sigcina ulwazi lwakho oluyimfihlo luvikelekile futhi luyimfihlo.
Zisebenza kanjani izikhangiso kumasevisi e-Google namasayithi angozakwethu
Sisebenzisa idatha ukubonisa izikhangiso ezibalulekile kuwe, noma ngabe zikumasevisi e-Google noma amawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza zeselula ezisebenza nathi.
Zisebenza kanjani izikhangiso zosesho
Zisebenza kanjani izikhangiso ze-YouTube
Zisebenza kanjani izikhangiso ze-Gmail
Zisebenza kanjani izikhangiso kumasayithi angozakwethu e-Google
Uma usebenzisa usesho lwe-Google, izikhangiso zingabonakala eceleni noma ngenhla kwemiphumela yosesho ehlobene. Isikhathi esiningi, lezo zikhangiso ziyalwa usesho usanda kulenza nendawo yakho. Isibonelo, uma usesha “amabhayisikili,” ungahle ubone izikhangiso zamabhayisikili athengiswayo eduzane nawe.
Kwezinye izimo, sisebenzisa idtha engeziwe njengosesho lwakho lwangaphambilini noma amasayithi owavakashele ukusiza ukuletha izikhangiso ezibalulekile. Njengoba usuvele wasesha “amabhayisikili,” manje uma usesha “amaholide,” ungahle ubone izikhangiso zosesho zezindawo ongaya kuzo ngebhayisikili ngenkathi ukuholide.
Uma ubuka amavidiyo ku-YouTube, ungahle ubone izikhangiso zidlala ngaphambili noma ekhasini levidiyo. Lezo zikhangiso zisuselwe kumavidiyo owabukile kanye nenye idatha efana nosesho lwakho lwe-YouTube lwamanje nolwakamuva.
Isibonelo, uma usesha “amathiphu emfashini” noma ubuka amavidiyo ahlobene nobuhle, ungahle ubone isikhangiso sochungechunge olusha lobuhle. Lezi zikhangiso zisiza ukusekela abadali bamavidiyo owabukayo.
Ungeqa iningi lezikhangiso ze-YouTube uma ungafuni ukuzibuka.
Izikhangiso ozibona ku-Gmail zisuselwe kwidatha ephathelene ne-akhawunti yakho ye-Google. Isibonelo, umsebenzi wakho kwamanye amasevisi e-Google njenge-YouTube noma usesho ungathinta izinhlobo zezikhangiso ozibonayo ku-Gmail. I-Google ayisebenzisi amagama okhiye noma imilayezo kubhokisi lakho lokungenayo ukukubonisa izikhangiso. Akukho muntu ofunda i-imeyili yakho ukuze akubonise izikhangiso.
Amawebhusayithi amaningi nezinhlelo zokusebenza zeselula ezisebenza nathi ukubonisa izikhangiso. Laba bakhangisi banquma ukubonisa izikhangiso ezinikeziwe kuzithameli “izinhlobo” ngokususelwe kulwazi oluyimfihlo abasebenzisi bethi ababelane ngalo nathi nedatha esiyiqoqayo mayelana nemisebenzi yakho ye-inthanethi: isibonelo, “25 – 34 iminyaka yobudala abamadoda abanentshisekelo ekuhambeni.”
Futhi singakubonisa izikhangiso ezisuselwe kumasayithi owavakashele ngaphambilini — isibonelo, ungabona isikhangiso sezicathulo ezibomvu ozingeze kukalishi yyakho yokuthenga ku-inthanethi kodwa unqume ukungazithengi. Kodwa senza lokhu ngaphandle kokuveza ulwazi lwakho oluyimfihlo njengegama lakho, ikheli le-imeyili, noma ulwazi lokukhokha.
Phatha ulawulo lomuzwa wezikhangiso zakho ze-Google
Sikunika amathuluzi ukulawula izinhlobo zakho zezikhangiso ozibonayo noma ngabe ungene ngemvume noma uphumile.
Lawula izikhangiso ezisuselwe kuzinketho zakho
Susa izikhangiso ongafuni ukuzibona
Funda ukuthi sisebenzisa yiphi idatha ukukubonisa izikhangiso
Kuzilungiselelo zakho zezikhangiso, ungalawula izikhangiso ezisuselwe ezihlokweni onentshisekelo kuzo. Isibonelo, uma usebenzisa izilungiselelo zokwenza ngezifiso izikhangiso ukutshela i-Google ukuthi uthanda umculo we-pop, ungahle ubone izikhangiso zokukhishwa okuzayo nemibukiso eduzane kwakho uma ungene ngemvume ku-YouTube.
Uma uvala ukwenza ngezifiso izikhangiso ngenkathi ungene ngemvume, sizoyeka ukukubonisa izikhangiso eziphathelene nezintshisekelo zakho kuwo wonke amasevisi e-Google kanye namawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza ezisebenzisana nathi. Uma uphumile, ukuvala ukwenza ngezifiso izikhangiso kuthinta kuphela amasevisi e-Google lapho izikhangiso ziboniswa khona.
Sikunika amandla okuthulisa lesi sikhangiso ezikhangisweni eziningi esizibonisayo ngamawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza zozakwethu. Ngokukhetha u-"X" kukhona lesikhangiso, ungasusa izikhangiso ongasazitholi zidingeka.
Isibonelo, izikhangiso zemoto kungenzeka zisizile ngenkathi usamakethela imoto entsha, kodwa uma usuhamba ujabulile ngemoto yakho entsha, awusafuni ukubona ezinye izikhangiso kusuka ku-Google zemoto osanda ukuyithenga.
Uma ungene ngemvume futhi uncike kuzilungiselelo zakho zezikhangiso, lokhu kulawula kuzothinta amadivayisi akho angene ngemvume kumawebhusayithi asebenzisana nathi.
Futhi ungavimbela izikhangiso ngaphandle kokungena ngemvume ngokusebenzisa okuthi Vimbela Lo Mkhangisi kumasevisi e-Google abonisa izikhangiso.
Sifuna ukukusiza ukuthi uqonde kangcono idtha esetshenziselwa ukukubonisa izikhangiso. Kungani okuthi Lesi Sikhangiso kuyisici esikuvumela ukuthi uchofoze umyalo ukuze ufunde ukuthi kungani ubona isikhangiso esinikeziwe. Isibonelo, ungahle ubone ukuthi isikhangiso sengubo ngoba ubukade uvakashela amawebhusayithi emfashini. Noma uma ubona isikhangiso sendawo yokudlela, ungahle usithole ngenxa yendawo yakho. Lolu hlobo lwedatha lusisiza ukukubonisa izikhangiso mayelana nezinto ongazithola zibalulekile. Kodwa khumbula, asabelani ngale datha nabakhangisi.